मृगौला – ताजा समाचार
प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिने भइन् नातिनीले मिर्गौला
ताजा समाचार । १८ फाल्गुन, काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार अस्पताल भर्ना हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको आज बसेको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा बुधबार प्रत्यारोपणलगायत आफ्नो स्वास्थ्योपचार योजनाबारे बताएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारलाई जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीका […]
कलेजो शरीरको छालाभन्दा दोस्रो ठूलो अंग हो । अन्य अंगहरु जस्तै कलेजो पनि शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसको सम्बन्ध पाचन प्रक्रियासँग हुन्छ । कलेजोले काम गर्न छोड्यो भने मानिसको मृत्यु हुन्छ । स्वस्थ मानिसको कलेजोको तौल १.३ देखि १.६ किलोग्राम हुन्छ । रातो र खैरौ रङमा हुने मानव शरीरको यो अंगले शरीरमा भएको विष […]
काठमाडौं, असोज १० । काठमाण्डौ–नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डको जामले रौतहका एकजना दुबै मृगौला फेल भएका विरामीको मृ’त्यु भएको छ । जनकपुरबाट काठमाण्डौका लागि छुटेको ना ७ ख ५३६४ नम्बरको बसमा रहेका रौतहट गरुणा नगरपालिका ८ का ३५ वर्षका रुपलाल शाहको गएराती थाँक्रे गाउँपालिका २ मा ज्यान गएको हो । दुबै मृगौला फेल भएपछि उनी परिवारसहित काठमाडौं आएका […]
काठमाडौँ : महिलाहरू आफ्ना भित्री वस्त्रलाई लिएर निकै संवेदनशील हुन्छन्। कतिपय महिलाले लाजका कारण पनि भित्री कट्टु धोएर घाम लाग्ने खुल्ला ठाउँमा सुकाउन हच्किन्छन्। कट्टुलाई प्रत्यक्ष घाममा नसुकाई लगाउँदा भने विभिन्न शारीरिक समस्या निम्तिने जोखिम बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ। हिउँद याममा त यो समस्या झनै बढी देखिने गर्छ। भित्री लुगाको सरसफाइमा ध्यान नदिनाले पिसाबसम्बन्धी […]
काठमाडौ । नेपाल जस्ता विकाशोन्मुख देशहरुमा मानिसको अभिन्न अंग मानिने मृगौला (किड्नी) धेरै फेल हुने गरेको छ । किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभिन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण हामिले ज्या*नै गुमा*उनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ । तसर्थ किड्नी भनेको के हो ? मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि […]
सधैं बिहान किसमिसको पानी पिउनाले शरीरलाई भिटामिन लगायत फलाम पर्याप्त मात्रामा पान्छ । साथै यसमा चिनीको मात्रा पनि कम हुन्छ, यसमा प्राकृतिक एन्टीअक्सीडेन्टको मात्रा बढ्न जान्छ । जसले विरामी हुनबाट बचाउँछ। किसकिस र त्यसको पानीलाई कलेजो र किड्नीको बिरामीलाई निको पार्न प्रयोगमा आइरहेको छ। किसमिसिको पानी लागातार ४ दिनसम्म पिउनाले कलेजो र किड्नीले राम्ररी काम […]
किड्नी हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । किड्नीमा खरावी आयो भने हामिलाई बिभीन्न रोगहरु लाग्ने गर्दछन जसका कारण हामिले ज्यानै गुमाउनु पर्ने समेत अवस्था आउँदछ । तसर्थ किड्नी भनेको के हो ?, मानव शरिरमा किड्नीले के कसरि काम गरिरहेको हुन्छ, किड्नी कसरि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दछ र किड्नी बचाउनको लागि के गर्नुपर्दछ ? लगायतका कुराहरु […]
एजेन्सी । श्रीमानले श्रीमतीलाई विवाह एनिभर्सरीमा सामान्यतया लुगा, गरगहना इत्यादी उपहार दिने गर्दछन् । कसैले महंगा महंगा सामानहरु पनि दिन्छन् । तर अमेरिकामा एक श्रीमानले भने आफ्नो श्रीमतीलाई अंग नै उपहार दिएका छन् । आफ्नो २३ औं एनिभर्सरीमा आफ्नो अंग नै उपहार दिएका हुन् । ति श्रीमानले मेमोरियल रिजनल हस्पिटलमा उपचार गराईरहेकी श्रीमतीलाई मृगौला नै […]